ကျပ်သိန်းထောင်ချီ အဂတိ လိုက်စားမှုမှ စွပ်စွဲခံအငြိမ်းစား ဗိုလ်ကြီး အာမခံလျှောက် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၃
ကျပ်သိန်းထောင်ချီ အဂတိလိုက်စားမှုမှ စွပ်စွဲခံရသူတစ်ဦး အာမခံလျှောက်ထားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တွင် ဦးပြုံးချိုအပါအဝင်ငါးဦးကို ဆက်လက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး စွပ်စွဲခံ (၅) ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးထွန်း(အငြိမ်းစား)၏ရှေ့နေက အာမခံလျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စွပ်စွဲခံဦးမျိုးခိုင်နှင့် ဦးကျော်နိုင်စိုးတို့၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးချစ်ကိုကိုက”စွပ်စွဲခံ(၂)ဒုတိယရဲမှူးကြီးကျော် ဇေယျရဲ့ရှေ့နေက မေးခွန်းမေး နေတာမပြီးသေးဘူး။ FMI မြေကိစ္စ၊ အယ်လ်ဖိုက်ကားကိစ္စ၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမြေကွက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တိုင်ကြားသူရဲ့တိုင် ကြားချက်စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်မှု အရတင်တယ်လို့တရားလိုဘက်က ပြောတယ်။ နောက်ထူးခြားချက်က စွပ်စွဲခံ(၅)ဗိုလ်ကြီး နေမျိုးထွန်း (အငြိမ်းစား)ရဲ့ ရှေ့နေက အာမခံ လျှောက်တယ်။ နောက်ရုံးချိန်းမှာ အာမခံအတွက်လျှောက်လဲချက် ပေးရမယ်”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။ ရုံးချိန်းကို အောက်တိုဘာ ၃ဝ ရက်သို့ပြန်လည် ချိန်းဆိုခဲ့ပြီး တရားလိုဦးစိန်တင်ကို ကျန်ရှိနေသည့် စွပ်စွဲခံရှေနေများက မေးခွန်း ဆက်လက်မေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးပြုံးချို၊ ဒုတိယရဲမှူးကြီး ကျော် ဇေယျ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးမျိုးခိုင်၊ ဗိုလ်ကြီး နေမျိုးထွန်း(ငြိမ်း)နှင့် မြေပိုင်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံထားရသူ ဦးကျော်နိုင်စိုးတို့ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တွင် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက် ရေးဥပဒေပုဒ်မ-၅၆/၆၃ဖြင့် ဇူလိုင် ၂၅ရက်နေ့က တရားစွဲထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားလို ပြသက်သေ ၂၇ ဦး တင်ထားကြောင်း သိရသည်။
အမှုမှာ ကရင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးပြုံးချိုသည် ယခင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဧပြီ ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်ရှိ မြေကွက်တစ်ကွက်နှင့် ပတ်သက်ပြီးသိန်းထောင်ချီ အဂတိလိုက်စားမှုဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးပြုံးချိုအပါအဝင် ခြောက်ဦးကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိန်တင်က တရားလိုပြုလုပ်၌ ဗဟန်း မြို့မရဲစခန်း၌ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ် မ-၅၆/၆၃ ဖြင့်အမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးပြုံးချို၏ အမှုတွဲထဲမှ ထွက် ပြေးလွတ်မြောက်နေသည့် ဦးကျော် ရဲသွေးကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေး ပေ။
နယ်စပ် ဆက်ဆံရေးရုံးများ ဖွင့်လှစ်ရေး အပါအဝင် အချက် ၁ဝ ချက်ကို မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နားလည်မှု ??
‘အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ပြနိုင်တာတွေကို လုပ်ဖို့အတွက် အားအပြည့်ရှိပါတယ်’ Ah Moon
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ကော့ထင်းစံပြကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား အဂတိ လိုက်စားမြှု?
ဒိန်းမတ်တွင် ကျင်းပသည့် ပထမအကြိမ် ‘ဥရောပဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်ဖိုရမ်’ ဥရောပရောက် မြန်မာလူငယ် ၅ဝ ကျေ??